My icon Dr Nyi Nyi at Luyechun meeting | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Aung San Suu Kyi Talk to Al Jazeera
British Islamist Mehdi Hasan at Muslim Leadership Dinner discussing unfair Islamophobia in the media »
Zani MgLuyechun (လူရည်ချွန်)30 minutes ago via mobile near Kamayut, Myanmar 5th Jan 2014
Dr Nyi Nyi အမှာစကားပြော- photo credit to Sayar Than Win
Since we met at LYC camp, I always looked up at him asagenious. At the “Nyan Gyi Shin _ Phyae So Khans” he used to wind up the answers given by the famous journalists, professors, writers, other BSPP CEC for youth and Ed to the questions given on the spot.
2-2-13 with Aty San & Sayagyi Dr. Nyi Nyi
He could wisely handle the unexpected questions posed on the spot. He had proved that his general knowledge and wisdom is the crème de la crème above the panel of people on the stage who were answering the questions posed by brightest and learnt LYC.
When we think about “A Mae Nwar Kyaung Thar_A Phyae Phayar Laung” saying….as to be able to answer the questions of hundreds of LYCs’ his wisdom is definitely enormous.
I was shocked when his dismissal was reported in the FRONT PAGE of Working People’s daily about the 1/3 of the level on the letside of the page. (i.e. roughly4O’ Clock position) stated that “HE WAS DISMISSED BECAUSE HE HAS CHINESE BLOOD and not fit for his position.”
I feel very sorry for my ICON and for the future of our country.
Soenyunt OoLuyechun (လူရည်ချွန်)
အကြိုက်ဆုံး ကဗျာလေးပါ ။
Myint Thein ကဗျာကကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့….အမိုးယိုရင်…တက်ပြင်ခွင့်….အကာပျက်ရင်…ဆက်ပြင်ခွင့်…xxx….ဆိုတဲ့…အခွင့်အရေးမှမရတော့…..
Zaw Myo Htet “ခေါင်မိုးက မလုံတော့ …..မိုး ဒဏ်ကို ကိုယ်ခံနေရတာ အမှန်ပဲ….” ဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့  သီချင်းကို အမှတ်ရမိလို့ပါ။ “အခွင့်အနဲ့ အရွဲ့အဆောင်း“ ဆိုတဲ့ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဥာဏ်နဲ့ စေတနာကိုလည်း လေးစားရပါတယ်။ အခွင့်အရေးတွေ အညီအမျှ ရကြတော့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ “အခွင့်”တွေ မနဲ့ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တိုးတက်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရာမှာ လူတိုင်းအတွက် တန်းတူအခွင့်အရေးတွေ လိုပါတယ်။
Dr Rita Kong
At University Of Medicine (1) , Pyay Road.
Dr Htek MyekLuyechun (လူရည်ချွန်)
LYC Reunion 2014 — with Daw Aung San Suu Kyi’s Dr. U Tin Myo Win, I regarded as my EX-friend as we were closed friend frequently stayed together successively at LYC camps. But now he even fail to accept my FB friend request, fail to reply my letters not only in FB but the letter I sent to him by hand.
Than MaungLuyechun (လူရည်ချွန်)
Ko Ko Gyi Sorry for not knowing. Who? Vice President?
Mÿö Kÿï Thä
Thuza Shein Yes sir
Thuza Shein Yes sir !
Ko Ko Gyi Please accept my sincere apology for not recognizing as the V.President was junior to me in IMM but we were not close friends just simple acquaintances and I am away from Myanmar for 29 yrs.
Nwei Nwei Tin Really Dr Sai Mauk Kham is 1967 batch of U M M.
Htek MyekLuyechun (လူရည်ချွန်)
LYC REUNION 5.1.2014 — with Health Minister Dr. Pe Thet Khin Khin.
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့ အာဘော်
Think Tank နှင့် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး၏ အကျိုးစီးပွား
၁၉၆၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အတွင်း လူရည်ချွန်နှင့် သင်္ချာလူရည်ချွန်ဆု ရရှိခဲ့ကြသည့် ကျောင်းသားများ၏ ရွှေရတု အကြိုတွေ့ဆုံပွဲကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၅ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ယခင်လိပ်ခုံး နေရာ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲ၏ ညပိုင်းအစီအစဉ်သို့ လူရည်ချွန် ကျောင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယသမ္မတက တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ရင်း ပြီးသွားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ အနာဂတ်တိုင်းပြည်ကို ဖွံ့ဖြိုးအောင်၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီအောင်၊ အေးချမ်းသော နည်းလမ်းမျိုးဖြင့် ကူညီကြစေလိုကြောင်း အမှတ်တရစကား ပြောကြားပေးခဲ့သည်။ လူရည်ချွန်များကို ပြန်လည်စုစည်းရသည့် ရည်ရွယ်ချက်၌လည်း အဖွဲ့တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းလျက် နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအတွက် အကျိုးပြုသော ပညာရှင်အင်အားစု (Think Tank) အဖြစ် ရပ်တည်ရန်ဟူ၍ ပါရှိသည်။
Think Tank ဟူသည် လူမှုရေးမူဝါဒ၊ နိုင်ငံရေး မဟာဗျူဟာ၊ စီးပွားရေး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် သုတေသနနှင့် အကြံဥာဏ် ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော အဖွဲ့အများစုသည် အကျိုးအမြတ် ရယူခြင်းမရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါကဲ့သို့သော နိုင်ငံများ၌ပင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးထားသော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ အချို့သော Think Tank အဖွဲ့များကို အစိုးရများ၊ အကြံပေးအုပ်စုများ သို့မဟုတ် အကြံပေးလုပ်ငန်းများက ထောက်ပံ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ပရောဂျက်များနှင့် ပတ်သက်သော သုတေသနလုပ်မှု သို့မဟုတ် အကြံပေးမှုများအတွက် ရန်ပုံငွေ ရရှိခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
Think Tank ဟူသည့် စကားရပ်သည် ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ အတွင်းမှသာ ခေတ်စားလာခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ၁၉ ရာစု ကတည်းက ယင်းကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများ ရှိခဲ့သည်။ လန်ဒန်တွင် Defence and Security Studies ကို ၁၈၃၁ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း၊ ဗြိတိန်တွင် The Fabian Society ကို ၁၈၈၄ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်၏ မူရင်း Think Tank အဖွဲ့ဖြစ်သော Brookings Institution ကို ၀ါရှင်တန်ဒီစီတွင် ၁၉၁၆ ခုနှစ်က အလှူရှင်သူဌေးကြီး ရောဘတ်ဘရွတ်ကင်းက တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယင်းသည် ပညာရှင်အဖွဲ့များနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံစံပြုရန်နှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအပေါ် မေးခွန်းထုတ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် သုတေသနဌာန ဖြစ်သည်။
Think Tank များ ပွားများလာခြင်းအပေါ် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ သက်ရောက်မှုကြောင့် အာဖရိက၊ အရှေ့ဥရောပ၊ အလယ်အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှတို့တွင် လွတ်လပ်သော Think Tank အဖွဲ့များ အစီအရီ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ယင်းဒေသများတွင် Think Tank တို့၏ အားထုတ်မှုနှင့် ၎င်းတို့ကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသော အထောက်အထားများအပေါ် အထင်သေး လျှော့တွက်ခဲ့မှုကြောင့် လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်နှစ်အတွင်းကျမှသာ အဆိုပါ ဒေသများ၌ Think Tank များ ထွန်းကားလာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယခုအခါ ကမ္ဘာပေါ်တွင် Think Tank အဖွဲ့ပေါင်း ၄၅၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ကောင်းစွာ အခြေကျနေသော Think Tank အမြောက်အမြားသည် စစ်ရေးခေတ် ကာလအတွင်း ထူထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာရေးရာ၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လေ့လာမှုနှင့် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒတို့အပေါ်၌ အဓိကထားသည်။
ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးပြုသော Think Tank အဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက်လာစေလိုကြောင်း The Daily Eleven သတင်းစာက ရေးသားအပ်ပါသည်။
This entry was posted on January 5, 2014 at 1:34 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “My icon Dr Nyi Nyi at Luyechun meeting”
January 8, 2014 at 5:20 am | Reply
Rita Kong editedadoc.
လူရည်ချွန် (၁၉၆၄-၈၈) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ Jan 5th 2014
(၁) ဥက္ကဋ္ဌ – ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း၊
(၂) ဒု ဥက္ကဋ္ဌ-၁ – ဒေါက်တာသန်းဝင်း၊
(၃) ဒု ဥက္ကဋ္ဌ-၂ – ဒေါက်တာတင့်တင့်ကြည်၊
(၄) အတွင်းရေးမှူး – ကပ္ပတိန်ကျော်ဋ္ဌေး၊
(၅) တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး-၁ – ဦးဝင်းအောင် (ရေကြောင်းကျောင်းဆရာ)
(၆) တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး-၂ – ဒေါက်တာအောင်ဇော်မျိူး၊
(၇) ဘဏ္ဍာရေးမှူး – ဒေါက်တာသူဇာရှိန်၊
(၈) တွဲဘက် ဘဏ္ဍာရေးမှူး – ဒေါ်သီသီမင်း၊
(၉) စာရင်းစစ် – ဒေါ်စန်းစန်းကြည်၊
(၂၀) ဒေါက်တာမဉ္ဇူဒွေး ၊
(၂၇) ဦးတင်မောင်လွင် (ရေကြောင်းပြမှူးကြီး)